Chifukidziro ndiko kupupura kuti Islam | Apg29
Chidzitiro nguo kupupura kuti vaMuslim.
Musikana akapfeka chifukidziro.
Apo vakadzi vaduku Swedish vave vaMuslim, vanotora ipapo vakakurumidza kusvika shawl vaMuslim. Havana kuita izvi vasati vari vaMuslim. Saka The sikavha kana Vheiri rava kureurura kuti zvino vaMuslim uye nhengo Islam.
Senguva mumugwagwa Chiitiko
Ndinorarama makiromita masere kubva Forserum. In Forserum kurarama vaMuslim vakawanda. Kana ndasvika Forserum ndinoona zvakananga kubva motokari yangu vakadzi vechiMuslim vanofamba mumigwagwa. Zviri mumugwagwa Chiitiko nevakawanda.
Ndinogona sei kuziva kuti pane vakadzi Muslim? I kuzviona hembe dzavo. Vane Scarves pamisoro yavo uye nzwisisika zvipfeko. saka nguo dzavo kupupura kuti vaMuslim.
Ndinoona vanhu vasina nguvo izvi pamusoro, kwete ndinofunga nokuti vaMuslim. Nemamwe mashoko, hembe kupupura kuti vaMuslim. Vanoratidza nyika kuti vaMuslim.
Vhara bvudzi ravo uye muchipfuva yavo
Inoti muna Korani kuti vakadzi vechiMuslim anofanira kufukidza bvudzi ravo uye muchipfuva yavo shawl kana nechidzitiro. Nokuti ichi nzira yokuratidza kuti vaMuslim kuitira kuti vanhu rirege maererano Website vechimoziremu islam.se kutinetsa navo. Saka chibharo navo. Ivo acharatidza kuti havasi varanda kana vasingatendi kuti akasununguka varume kuti kunetsa uye chibharo.
Korani: uti vakadzi vanotenda kuti vanofanira kudzikisa ake anopenya uye anorinda nhengo dzavo dzakavanzika uye kwete kuratidza zvakawanda pakushongedza kwavo kupfuura undere anogona kuoneka; Ngavarumbidze saka vaswedere zvifukidziro dzavo (Khimar) zvokuti dzaVakadzika muzvipfuva ...
Hazvina ndima iyi, nhamba 31 chitsauko rechi24 ari Korani raMwari, rinova hwaro kwokupfeka kwechidzitiro. Kana VaMuslim kukurukura ndima iyi rinotaura pazita Khimar rakashandurwa kuti "chifukidziro,". Mohammed Knut Bernström ndanyora izvi omuzasi kuti ndima dzacho kududzirwa Korani:
Shoko Khimar (plur. Khumur) rinoreva pechidzitiro Arab vakadzi pamberi uye pashure veMubatanidzwa Islam munhau aiva netsika achabatanidza bvudzi. Maererano vakawanda chaiwo vatsoropodzi yaipfekwa mechidzitiro, kana kusatonzwa sezvo chishongo, zvakasiyana-siyana rakarembera kumashure uye nekuti nguvo vakadzi pasi ipapo richikunda nokuriita kwaisanganisira pamberi décolletage upenyu, yaiva bust chikamu kubhawa. Vakadzi vari vakakumbira pano nei kuzvivanza tichibatsirwa imwe Khimar.
kufukidza musoro wako
Mumwe dzenhoroondo vatsoropodzi sezvo Bernström nezve ndiye Ibn Kathir (d. 1373) achitsanangura shoko Khimar rinomiririra chinhu anofukidza uye rinoshandiswa kufukidza musoro. Kuti batanidza chifukidziro zvinoreva kurudzosa kumativi uye kuti njodzi. Izvi zvichaitwa pamusoro pamutsipa uye muchipfuva kuitira kuti hapana chinogona muonekwe navo. Ibn Kathir zvakare anotaura muporofita mudzimai Islam Muhammad 'A'ishah:
Nyasha ngadzive pamusoro vakadzi mukutanga vanotodzoka. Ipapo Mwari akazivisa ndima: 'Ngavabvunze saka vaswedere zvifukidziro dzavo kufukidza pachipfuva' vakabvarura bodices dzavo uye apfeka pavo.
Chinangwa kwechidzitiro uye nguo Muslim ndechokuti havasi ndirumbidzwe. Asi ndinoti kuti zvinopikisana. Meso angu unokweverwa kuna siyana mbatya uye zvifukidziro navakadzi Muslim vanopfeka. Vakamira kunze kwechaunga.
To kudimburira anofanira vakafunga kuti akarurama ndiwo zvinoverengeka ezvinhu anofanira akasangana. Idzi dzinosanganisira:
It dzichafukidza muviri wose, sezvinorondedzerwa pamusoro.
Hazvifaniri kuva Kushonga pachayo. The upholstery Nemamwe mashoko, regai kuswedera pasingadiwi pfungwa pacharo, iro zvechokwadi ndeimwe sokunowanzoreva ndima 24:31.
The nguvo havafaniri kuva segirazi.
Vanofanira kuva inotsikwa kwete Dodge mumwe saka vanoratidza muviri siyana kana kuti anonhuwirira.
Murume wacho zvipfeko
The shamwari Abu Umamah vakandiudza kuti akanzwa Muporofita Muhammad - rugare ngaruve pamusoro pake - vanoti:
ini Pave zvitanhatu izvi uye ini ichaita iwe Paradise: kana mumwe wenyu ataure, haangakuregi nhema; akaronzesa chinhu haangakurambiriyi uchatengesera kuti chivimbo; kana anoita chipikirwa haangaruvhuni kuiputsa; kudzikisa meso enyu; vanomira maoko ako uye kudzivirira [muviri] nhengo dzako dzakavanzika.
Zvakuine mitemo sei nemapfekero vakadzi chinofanira kuti ave akarurama, kunewo urongwa remunhu zvipfeko. Izvi zvinosanganisira kuti vabvumirwe (halal), izvo zvinoreva kuti muenzaniso kuti varege kuitwa esiriki kana ane goridhe kana zvinhu izvi zviviri zvakachengeterwa vakadzi. Vanofanirawo kuva mutete kana usiri saka vanoratidza rimwe dzomuviri mannan haienderani (awrā '). Havafaniri kutevedzera disbelievers mbatya uye Zvinokurudzirwa (mustahabb) kupfeka nguo chena. Uyezve, zviri rambidzwa kupfeka mbatya aunonyanya nenzira yakadaro kuti anokwezvera pachavo uye kuti mutakuri Inozivikanwa uye inozivikanwa kuti.
Small vana kupfeka zvifukidziro
Vanoti kana vana kupinda kuyaruka, twavanopfeka nezvifukidzo izvi, asi ini kazhinji kuona vana vaduku pfeka nezvifukidzo zvameso. Nenzira iyi, vana vava sexualized uye vanozviti mukusaziva kuti vaMuslim.
Mona Sahlin uye Lena Hjelm-Wallens Scarves
On September 11, 2001 akaona anotyisa kwemagandanga muUnited States kuti yakauraya kusvika 3,000 vokuAmerica uye akasika hondo zvikuru zvinotyisa. Kana akaita nhengo Hurumende Mona Sahlin uye Lena Hjelm-Wallen rive chechi Swedish vane Scarves pamisoro yavo. Izvi Akagumbuka kosi zhinji uye kungaita sokuti isinganzwisisiki chiito.
ONA MUFANANIDZO: Mahmoud Aldebe, Lena Hjelm-Wallen uye Mona Sahlin pashure 11 September ari kushanyira imwe chechi .
Kana mukaitira, kwete mberi conspiratorial, zvakanzi zvichida kuratidza rutsigiro rwavo, asi iye zvino ari shawl ari kureurura vaMuslim, izvo takakurukura zvakadzama munyaya ino, waiva Scarves dzavo hapana asi inobvuma vaMuslim!
Unofunga vaMuslim vachifunga pavakaona mbiri shawl yakashongedzwa nhengo hurumende? Vaifunga vaiva vaKristu? Kana akataura navo vaMuslim? Ivo akanomira uchapupu kubudikidza zvameso kuti vaiva vaMuslim.
Uchapupu kuti Mona Sahlin chechiMuslim
Asi chokwadi ndechokuti pane chapupu, kana dzinenge nepanomboratidza kuti Mona Sahlin zvechokwadi muMuslim. Uchapupu uhwu rinobva mukadzi Muslim Nalin Pekgul kutarisana sarudzo mukuru:
"Mumwe Mona Sahlin Somuenzaniso, kuti zvichaita tick zvakawanda Tensta nokuti munofunga iye ndiye rubatso kodzero dzevamwe kuti munyika ino pane zvichida vamwe vaMuslim vakawanda avo aisazombofa tick."
My noushingi. uye:
"Ndiri kufara chaizvo kuti iye (Sahlin) chepamusoro nokuti ndinotenda kwaari, ndinogona kutengesa chero mari muna Tensta, asi kwete pamwe ndingadai kutengesa zvimwe vaMuslim saizvozvo"
State Kushanyira Iran muna 2017
Nezvokumutswa kushanya nehurumende kuna Iran muna February 2017 vakatakura munhukadzi vashumiri chifukidzo. Izvi Zvechokwadi zvakanga chinoshamisa chaizvo kupiwa kuti mukadzi vechikamu dzimwe nyika 'hurumende kushanya haana ainzwa kuita zvakafanana.
ONA MUFANANIDZO: Vashumiri zvameso.
Saka chinhu rakasiyana kune Swedish nhume. Izvi chinhu kupfuura kuratidzwa tsitsi kana kumeso? Kwaiva kupupura kuti vaMuslim?
Ann Linde chifukidzo anoratidza wake maitiro
The kuitika vatorwa gurukota Ann Linde of Commerce kuti akapfeka jira Iran vanoshanyira 2017.
zvirokwazvo vazhinji vakafara nhau kuti Margot Wallström kuti kusiya, asi mufaro wakanga pfupi zvakakwana yakapiwa kuti Commerce Ann Linde eftertädde naye.
Akanga ari kushanyira Iran muna February 2017 uye yakafukidzwa pachavo (https://media.publika.md/en/image/201702/full/_94625808_annlindeirna_41696400.jpg) pamwe chete nemamwe makurukota munhukadzi. Tichifunga kuti akatora chifukidzo saka izvi zvinopa nepanomboratidza kuti iye haasi asingasaruri vari kunetsana pakati pevaIsraeri Palestinian Authority.
Zvirokwazvo kurwisa Middle East chete gutsaruzhinji, vaIsraeri uye anoenda tsoka mugadzi vake Margot Wallström vake.
2011 akagadzwa Palestinian Association Ann Linde "gore Palestine" nemashoko anotevera okuti:
Ann Linde, kuburikidza nebasa ravo uye kuzvitsaurira, nzendo dzake muParestina uye Israeri, dzavo neshamwari uye kukurukura mapato ose, waisimbisa namaParistina 'mamiriro ezvinhu pamwe lucidity, zvakajeka uye ushingi, vakawanda uno kuziva East Jerusarema guta guru ramangwana Palestinian State uye kuziva vokuParestina sezvo nhengo nhamba 194 ari UN. Ann Linde aiomerwa rugare uye kururamisira kwagara aiva Kusimbisa mutemo dzakawanda uye dzevanhu nenheyo.
Chifukidziro inoratidza chii zviri Middle East gwara iye zvokutengeserana kubvongodzwa,. Saka pano iye akati yegutsaruzhinji kosi mu Tel Aviv muna 2008:
"Kurwisana Israeri uye Palestine, apo chinokosha chinodiwa kuti rugare kuti veIsrael rinotambudza inoguma, ichi chinoita kuti yose Middle East inogona mune rugare mirayiridzo."
Cherechedza kuti iye anotaura "Palestine" sezvinoita nyika kare muna 2008, makore maviri asati evanhu democratic hurumende akaziva kuti munyika, kunyange zvazvo usiri nyika.
Chidzitiro haagoni kuzviponesa here
In Tehran, Iran akava mukadzi muna 2018 akatongerwa makore maviri mujeri nokuti mhosva vechimoziremu kuti pachena akabvisa chifukidziro ake . Mumwedzi miviri vakasunga vakadzi 30 pamusoro chikonzero kuti vakaramba kupfeka chifukidziro.
Murayiro pamusoro kwokupfeka chifukidziro vose vaMuslim uye vasiri Muslim vakadzi Iran vave mu simba sezvo ropa Islamic chimurenga 1979th
Regai kutaura zvakajeka: chidzitiro haagoni kuzviponesa here. Asi inzira kudzvinyirira uye muchamanikidza iwe, kana iwe vaMuslim kana kwete.
Chete anogona kuponesa zvechokwadi uye akaisa iwe zvachose vakasununguka Jesu Kristu.
Mwari anokuda iwe
Mwari anoda vanhu vose, asi hapana vheiri chinogona kuponesa kana kufadza Mwari. Unofanira kuponeswa uye chaizvoizvo ndapota Mwari, unofanira kubvuma Mwanakomana wake Jesu Kristu uyo ​​akatumwa munyika kufira pamuchinjikwa kuti aponese iwe.
Jesu mupenyu nhasi - wamuka kubva kuvakafa. Kana iwe kumugamuchira uchaponeswa uye wakasununguka. Jesu Kristu anogadza vanhu zvechokwadi vakasununguka.
Bhaibheri rinotaurawo kuti mechidzitiro kana shawl, asi muchirevo chechinyorwa chino, zviri pachena kuti hapana mutemo pasina tsika. Jesu akaita vanhu vakasununguka, kwete nokuti kamwe zvakare kuenda kuiswa muutapwa, asi kuti ivo varambe vakasununguka.
Mona Sahlin vatendeukira Islam?